भारत सरकारको अनुदानः साढे २६ करोडमा बन्दै श्री कान्ति भैरव मावी — Arthatantra.com
Arthatantra.com > पूर्वाधार > भारत सरकारको अनुदानः साढे २६ करोडमा बन्दै श्री कान्ति भैरव मावी
भारत सरकारको अनुदानः साढे २६ करोडमा बन्दै श्री कान्ति भैरव मावी
काठमाडौं । भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा पुनर्निर्माण हुने काठमाडौं कागेश्वरीस्थित श्री कान्ति भैरव माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय भवनको शिलान्यास भएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) सुशील ज्ञवाली र भारतीय राजदूतावासकी मिसन उपप्रमुख नामग्या खम्पाले संयुक्त रुपमा शिलान्यास गर्नुभएको हो ।
शिलान्यास कार्यक्रममा ज्ञवालीले नेपाली वास्तुकला झल्कने डिजाइनसहित नमूना भवन बन्न लागेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै शैक्षिक गुणस्तरमा समेत विद्यालय नमूना हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
‘सामुदायिक विद्यालयहरुमा भवनसहितका पूर्वाधार निर्माणमा भएको आन्तरिक लगानी र बाह्य सहयोगले शिक्षाको गुणस्तर बृद्धिमात्र होइन शिक्षा प्राप्तिमा देखिएको विभेद कम गर्न पनि पक्कै योगदान गर्नेछ’ ज्ञवालीले भन्नुभयो ।
त्यसैगरी, क्यान्टिन, आगलागी नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र, तीनवटा व्याडमिन्टन कोर्ट र दुईवटा बास्केटबल कोर्ट, कार्यक्रम गर्ने मंञको पनि निर्माण हुनेछ । भवनको हरेक तलामा दुवैतर्फ छात्र र छात्राका लागि अलग अलग शौचालय हुनेछन् । विद्यालयका शिक्षक विष्णु प्रसाद पौडेलका अनुसार विद्यालयमा करिब नौ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
निर्माण अवधि १५ महिना भए पनि निर्माण कम्पनी योगी हनुमान जेभीले एक वर्षमै निर्माण सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी कार्यक्रममा दिइएको थियो । यही माघ २६ गतेबाट निर्माण कार्य सुरु भएको छ ।
भूकम्पपश्चात शैक्षिक क्षेत्र पुनर्निर्माणमा भारतीय अनुदान आयोजनाअन्गर्तत बन्न लागेको यस विद्यालयको परामर्शदाता भारतीय संस्था केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्थान, रुरकी रहेको छ । भारत सरकारले विद्यालय पुनर्निर्माणमा ५ करोड अमेरिकी डलर बिहीबारको विनिमय दर ११६ अनुसार करिब ५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ) सहयोग गरेको छ । अनुदान सहयोगमा आठ जिल्लामा ७१ वटा संरचनाहरु निर्माण हुनेछन् । तीमध्ये आठवटा सम्पन्न भइसकेका छन् भने ५६ वटा पुनर्निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् ।
२०७७ फागुुण ६ गते १६:१९ मा प्रकाशित
सेयर बजारलाई डोर्याउँदै बैंकिङ समूह, कारोबारमा एनआइसी एसिया बैंकको अग्रता
वोमी माइक्रोफाइनान्सको ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर शेयरधनीको डिम्याट खातामा
कालीमाटी, कुलेश्वर र बल्खु क्षेत्रका ४० जनाभन्दा बढी तरकारी व्यापारीमा कोरोना संक्रमण
५४ प्राथमिक विद्यालय शिक्षकविहीन
किन चिन्ता? गाउँ-गाउँबाट सेयरमा लगानी गर्ने लहर यसरी बढ्दैछ !
जागिर खानेहरुका लागि यस्तो छ अवसर : यतिधेरै संख्यामा कर्मचारी माग (सूचनासहित)